पौडेल पक्ष असन्तुष्ट हुँदाहुँदै स्पष्ट बहुमतबाट सभापति देउवाले गरे काँग्रेसमा यस्ता निर्णय ! | suryakhabar.com
Home राजनीति पौडेल पक्ष असन्तुष्ट हुँदाहुँदै स्पष्ट बहुमतबाट सभापति देउवाले गरे काँग्रेसमा यस्ता निर्णय !
on: २६ मंसिर २०७६, बिहीबार २०:२४ In: राजनीतिTags: No Comments
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय विभागहरुको संरचनात्मक र सङ्ख्यात्मक परिमार्जनसम्बन्धी प्रस्ताव छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको छ । काँग्रेसले विधानमा उल्लिखित २८ विभागलाई बढाएर ४१ पु¥याउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो ।
सबै स्थानीय तहमा केन्द्रित रहने तेस्रो चरणको जागरण अभियानको मिति परिवर्तन गरेर आगामी माघ १६ गते शहीद दिवसका दिनदेखि माघ २५ सम्मलाई निर्धारण गरिएको मुख्यसचिव पौडेलले बताए । उनले बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आएनन् भने नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला बैठकको बिचबाट निस्किएका थिए । नेताहरुको बहिस्कारबा बिच पनि सभापति देउवाले निर्णयहरु गरेका छन् । सभापति देउवा पक्षमा स्पष्ट बहुमत छ ।
२६ मंसिर २०७६, बिहीबार २०:२४